Dowladda oo sheegtay in qorshaha ugu danbeeya ee doorashada laga sugayo guddiga doorashada
Mjournal :–Wasiirka Wasaaradda Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska Mudane Maxamed Cabdixayir Maareeye oo la hadlay Wakaaladda Wararka Qaranka Soomaaliya (SONNA) ayaa wuxuu ka hadlay shir la filayo inuu ka dhaco magaalada Muqdisho horaanka bisha soo socota. Wasiirka ayaa...
Dowladda Turkiga oo waxba kama jiraan ku sheegtay in ay aqoosadeen basaboorka Soomaaliland
Mjournal :–Safiirka Turkiga ee Soomaaliya Amb. Olgan Bekar ayaa goor dhow shir jaraa’id ku qabtay Xarunta Safaaradda Turkiga ay ku leedahay magaalada Muqdisho, isagoo kaga hadlay qaababkii dowladda Turkiga uga fal celisay isku daygii afgambiga ee fashilmay. Amb. Olgan Bekar...
Erdogan oo eedeyn ballaaran u jeediyay sarkaal ka tirsan dowladda Mareykanka
Mjournal :–Madaxweyne Erdogan ka dalka Turkiga ayaa sarkaal sare oo ka mid ah militariga Mareykanka ku eedeeyay in uu la jiro dadkii isku deyay inay dowladda afgembiyaan, laba isbuuc ka hor. Hadallada Mr Erdogan, waxa ay ku wajahan yihiin Janaraal Joseph Votel oo ah...
Dowladda Turkiga oo wali daba-gal ku heysa dusiyada dalalka caalamka uu ku leeyahay wadaadka Sh. Gulen
Mjournal :–Dowladda Turkiga ayaa ka dalabtay xukuumada Nigeria xirto tiro iskuullo ay sheegtay inuu leeyahay Fetullah Gulen oo dhawaan ay Dowladdu ku eedeysay in uu ka dambeeyay afgambigii dhicisoobay ee ka dhacay dalka Turkiga. Danjiraha Turkiga u fadhiya Dalka Nigeria,...
Guddiga doorashada Qaranka oo qorshahooda u gudbinaya madasha-wadda-tashiga
Mjournal :–Guddiga hirgelinta doorashada ee heer Federaal ayaa lagu wadaa in qorshahooda ugu dambeeya ee doorashada u gudbiyaan Madaxda Madasha Wada-tashiga Qaran, kuwaasoo 2-da bisha Agosto shir isugu imaanaya. Guddigan oo uu madax u yahay Avv. Cumar Dhagey oo ah La...
Aamino Mohamed” nabada Soomaaliya halis ayeey gali kartaa haddii aan la sii waddin maal-galinta ciidammada AMISOM
Mjournal :–Wasiirada Arimaha Dibadda ee dalka Kenya, Aamina Maxamed ayaa QM u sheegtay in loo baahan yahay in beesha caalamku sii waddo bixinta qarashaadka AMISOM hadii gobolka laga doonayo nabad waadha. Khamiistii khudbad ay ka jeedisay xarunta QM ee New York ayaa Amina ku...
Ganacsato Soomaali ah oo hantidooda lagu gubay dalka Koonfur Africa
Mjournal :–Dukaamo ganacsi oo ay la haayeen muwaadiniin Soomaali ah ayaa lagu gubay dalka South Africa, kuwa Kalena waa lagu boobay xilli la isku diyaarinayo doorashada dowladaha hoose ee dalka South Africa. Xilli todobaad kaliya ay ka harsan tahay doorashooyinka dowladaha...
Xildhibaanno Kenyaan ah oo dalbaday in la furo xadka u dhaxeeya Kenya iyo Soomaaliya
Mjournal :–Xubno ka tirsan baarlamaanka dalka Kenya ayaa ka dalbaday dawlada Kenya in la furo xadka Kenya iyo Soomaaliya u dhexeeya oo muddo xirnaa haatan. Xildhibaanka Bariga Wajeer, Cabbaas Sheekh Maxamed ayaa dawlada Kenya ka codsaday inay furto xadka labada dal u...
Hillary Clinton oo si adag u weerartay musharaxa xisbiga jamhuriga Donald Trump
Mjournal :–Hillary Clinton ayaa weerar afka ah mar kale ku qaaday murashaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump. Hillary ayaa sheegtay in Donald Trump fikaradihiisu ay aad u khaldan yihiin isla markaana aanan lagu hoggaamin karin shacabka Mareykanka. Waxay kaloo sheegtay in...
Natiijada imtixaanka Qaran ee dusiyada sare oo la shaaciyay
Mjournal :–Waxaan halkan idinku soo gudbinaynaa natiijada Imtixaanka Qaran ee ay Wasaarradda Waxbarashada Xukuumadda faderaalka Soomaaliya Qaaday Sanad Dugsiyeedka 2015-2016. Fadlan lifaaqa hoose kala deg. DHAGAXTUUR DHAME-YASIN GIIRE Hantiwadaag-1 Howlwadag...
Kulanka wadda-tashiga hindise sharciyeedka jinsiyada oo la daah furay
Mjournal :–Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Federaalka ayaa maantay daah furtay shir socan doona sedex maalmood oo looga tashanayay Hindise Sharciyeedka Qabya Qoraalka Jinsiyadda Soomaaliya, kaasoo ay ka soo qeyb galeen 200 ergo oo ka kala socday Dowlad Goboleedyada,...
Golaha wasiirada oo yeeshay shirkoodii todobaadlaha
Mjournal :–Golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya oo maanta isugu yimid kulankoodii joogtada ahaa ayaa ka hadlay arrimo ay kamid yihiin amniga dalka, gaadiidka iyo duulimaadyada, arrimaha samafalka iyo ciyaarihii maamul goboleedyada ee soo gaba-gaboobay,...
Talyaaniga oo wadda olale ka dhan ah tahriibka
Mjournal :-Dowladda Talyaaniga ayaa bilawday olole ay uga hortagayso dadka ka soo haajiraya waqooyiga iyo galbeedka Afrika ee isku dayaya inay doon ku imaadaan badda si ay Yurub u imaadaan. Waxay dawladda ololaha u isticmaalaysaa internetka, TV-ga, raadiyaha iyo baraha bulshada...
Shir looga hadlayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo ka dhacay dalka South Africa
Mjournal :–Shir looga hadlayay doorashooyiska Soomaaliya ee sanadkan ka dhacaya Soomaaliya ayaa ka dhacay magaalada Pretoria ee dalka Koofur Afrika. Shirkan oo uu qabtay Machadka Cilmi baarista ee Human Sciences Research Council ayaa waxaa ka qeyb galay Xildhibaan Faarax...
Madaxweyne Xassan Sheekh” cayaaraha waxaa ay ka qeyb-qaataan is dhax-galka bulshada
Mjournal :–Madaxweynaha Somalia Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sheegay in Qabsoomidda Cayaarihii Maamul-goboleedyada dalka ee dhawaan lagu soo Gaba-gabeeyay Muqdisho ay muujinayaan horumarka laga gaarey dib u heshiisiinta, nabadda iyo is-dhexgalka bulshada. Xasan Shiikh ayaa...
Brack Obama oo taageero mug leh siiyay musharax madaxweyne Hillary Clinton
Mjournal :–Madaxweyne Obama oo ka hadlayay shirka xisbiga Dimuqraadiga ee ka socda Philadelphia, ayaa taageeray musharaxa xisbiga ee madaxtinimada. Obama wuxuu yiri Hillary Clinton waa qof degan oo dadka dhegaysata, qof kastana si ixtiraam leh ula dhaqanta si kasta oo...
Al-shabaab oo bir anteeno ku bur burisay Kenya
Mjournal :–Wararka ka imaanaya magaalada Mandhera ee Gobolka Waqooyi bari ee Kenya ayaa sheegaya in dagaalyahano looga shakisan yahay Al-Shabaab ay bur buriyeen anteenooyin Isgaarsiin ku yaalla deegaanada Lafey iyo Fino. Anteenooyinkan ayaa ayaa kuwo ay isticmaaleysay...
Ra’iisal wasaare Sharm’arke oo ka qeyb-galay munaasabada sanad-guuradii koowaad gudiga doorashada Qaran
Mjournal :–Xafladan oo lagu soo bandhigayay waxqabadkii Guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka Qaranka oo maanta sanad laga joogo markii la dhisay ayaa waxaa ka qeybgalay Ra’iisul wasaaraha Xukuumada Somaaliya ,Wasiirada Arimaha gudaha iyo warfaafinta,xildhibanao katirsan...
Taliye cusub oo loo magacaabay laanta socdaalka iyo jinsiyadaha
Mjournal :–Taliyihii hore ee Nabadsugida Gobolka Banaadir Maxamed Aadan Koofi ayaa si rasmi ah loogu magacaabay Taliyaha Laanta Socdaalka iyo Jinsiyada ee dowladda Soomaaliya. Wareegto ka soo baxday Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha ayaa G/sare Maxamed Aadan Koofir loogu...
Tirada dadka Kenyaanka ah ee ku nool xerada Dhadhaab oo la soo saaray
Mjournal :–Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaastay in 42,000 oo ruux oo muwaadiniin Kenyan ah ay si sharci darro ah ugaga mid noqdeen qaxootiga Soomaalida ah ee ku nool xerada Dhadhaab. Hay’ada Qaramada Midoobay u qaabilsan qaxootiga UNHCR ayaa sheegtay in muwaadiniintan...